#Waxbarashada nabada ee muhiimka ah Archives - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Shirka xagaaga ee shanta maalmood ah ee dheer (Ogosto 29-Sebtember 2) ayaa kulmin doona aqoonyahanno hore oo xirfadeed, cilmi-baarayaal sare, iyo xirfadlayaal ka kala socda adduunka oo dhan. [sii wad akhriska…]
"Khatarta waxbarashada nabadda (CPE) waxay dooneysaa inay carqaladeyso xiriirrada awoodda asymetrical iyo inay xirxirto xididdada siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo taariikh." -Basma Hajir & Kevin Kester [sii wad akhriska…]
Johan Galtung oo ku saabsan Waxbarashada
“Nooc kasta oo waxbarasho waa in lagu qiimeeyaa qaab dhismeedkiisa su’aalaha soo socdaa waa in marwalba la isweydiiyo: Ma ogolaataa jawaab celin? Miyey dadka isugu keentaa wax wada qabsi halkii ay iyaga kala fogeyn lahaayeen? Miyey ogolaaneysaa kaqeybgal guud, oo wadarta guud ee waxbarashada ayaa awood u leh is-beddel iskeed ah? Marka la soo koobo, ma jiraa wada hadal ku lug leh bartayaasha, halkii si fudud fariin loogu gudbin lahaa goobaha waxbarashada? ” - Johan Galtung [sii wad akhriska…]
Waxbarashada Nabadeed ee Khatarta ah iyo Jinsiyadda Caalamiga ah: Sheekooyinka laga soo qaatay Manhajka aan rasmiga ahayn
"Critical Peace Education and Global Citizenship," oo ah buug cusub oo ay qortay Rita Verma, ayaa soo bandhigaysa xisaabaad sheeko oo matalaya siyaabo badan oo macallimiinta iyo u dhaqdhaqaaqayaasha waxbarashadu ay u rumoobeen fursadaha nabadda iyo dib-u-heshiisiinta iyada oo loo marayo manhaj aan rasmi ahayn. [sii wad akhriska…]
U wac waraaqaha shahaadada koowaad ee jaamacadeed: Daryeelka sida sharciga bini-aadamnimada ee waxbarashada
#CritEdPol, Swarthmore College ee Joornaalka Daraasaadka Siyaasadda Waxbarashada Xeeldheer, wuxuu ku dhawaaqayaa wicitaan furan oo loogu talagalay waraaqaha shahaadada / mashaariicda shahaadadooda soo socota iyadoo mawduuca daryeelka loo abaabulay inuu yahay ficil lagama maarmaan ah oo bini-aadamnimo ku dhex leh siyaasadda waxbarashada. Soo gudbinta hordhaca ah ee ku eg Diisambar 10, 2016. [sii wad akhriska…]
Goobta ugaarsiga: Hagaha Manhajka oo dhameystiran oo loogu talagalay Barayaasha Kuleejka
Waxaa qoray Simona Sharoni, Ph.D www.simonasharoni.com [nooca nooca = ”glyphicon glyphicon-option-vertical”] [emailka waa la ilaaliyay] (Qeybaha hoose. Guji halkan si aad u soo dejiso manhajka oo dhammeystiran.) Tilmaamahan manhajka waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad u jeedsato baaritaanka The [sii wad akhriska…]